Doorashada 20/21: Tartan u dhaxeeya Musharixiinta Jeebka-wayn | KEYDMEDIA ONLINE
Doorashada 20/21: Tartan u dhaxeeya Musharixiinta Jeebka-wayn
Doorashooyinka December 2020 illaa February 2021 dhici doono ayaa la filayaa inay noqdaan kuwii ugu adkaa marka laga eego xagga dhaqaalaha, oo loogu roonaadey siyaasiyiinta “Jeebkooda buuxa”, iyadoo shaqsiyaad badan lacag la’aan uga hari doonaan.
MUQDISHO, Soomaaliya – “Ama Buur Ahaw Ama Buur ku tiirsanow”, ayaa lagu tilmaamay doorashadda, maadaama Musharixiinta ay isagu jiraan kuwa dawlado shisheeye maalgeliyaan iyo kuwa isku-tashi ku gala tartanka.
Shaxda cusub waxay muujinaysaa in qorshaha Farmaajo iyo Fahad Yaasiin dejiyeen uu yahay in siyaasiyiinta lagu reebo dhanka lacagta, iyadoo la kordhiyay lacagta diiwaangelinta, oo laga badiyay labo-jibaar doorashaddii 2016-2017.
Musharaxiinta u tartamaya Aqalka Sare waxaa laga dhigay $20,000 (labaatan kun oo dollar) musharax kasta, halka Aqalka Hoose laga rabo $10,000, (Toban Kun oo dollar) musharaxa.
Doorashadii 2016-2017, kursiga Aqalka Sare qofkii u tartamayay waxaa laga qaadey $10,000 (Toban Kun oo dollar), iyadoo Gollaha Shacabkuna ahaa $5,000, (Shan Kun oo dollar).
Lacag lagama qaadi jirin musharaxiinta Xildhibaanada doorashooyinkii ka horeeyay Farmaajo. Dhalinyaro sanadkan rabey kursi Xildhibaanka ayaa u haray lacagta la badiyay.
Diiwaangelinta waxaa usii dheer Musharaxa Xildhibaan inuu iibsado codadka ergada gaaraysa 101 ee wax dooranaysa, iyadoo usii dheertahay qarashaadka ololaha doorashadda.
Dhaqaalaha ugu badan ee doorashadda wuxuu ka imaanayaa Qatar iyo Imaaraadka, waxaana jira dalal kale oo kusoo biiray sanakdan, taasoo tartanka xilka ugu sareeya dalka sii adkaysay.
Waxaa la saadaalinayaa in lacagta diiwaangelinta Musharaxa xilka Madaxweyne ay noqoto $50,000 illaa $60,000, taasoo labo jibaar ka badan doorashadii 2017 oo ahayd $30,000.
Waa Mashruuc dhaqaale oo loo sameeyay gudiga doorashooyinka, oo ay soo magacaabayaan Farmaajo iyo Madaxda Maamullada, iyadoo lacagta kasoo xaroota ay kala qeybsan doonaan.
Haddii shan murashax ay u tartamaan mid kasta oo kamid ah 275-ka kursi ee Aqalka Hoose, guddiga doorashooyinka ayaa aruurin doono $13,750,000 [Saddex iyo Toban milyan, Todobo boqol iyo Konton Kun oo dollar]. Golaha Shacabka, haddii tiro lamid ah u tartamaan kursigii kasta, waxaa la helayaa $5,400,000 [Shan milyan iyo Afar Boqol oo Kun].
Waxay doorashaddan ka dhacaysaa Waddan ku dhowaad 70% dhalinyaradiisa aysan haysan shaqooyin, islamarkaana ay ka jirto faqri, colaado malaayiin saameysay iyo abaaro joogto ah.